N'ime ụgbọ ala Indoor na ndị enyi gị na Harderwijk - Thrilltalk.com
Home/Ihe/N'ime ụgbọ ala Indoor na ndị enyi gị nọ na Harderwijk
N'ime ụgbọ ala Indoor na ndị enyi gị nọ na Harderwijk
0 23 Nkeji 1
Onye ọ bụla maara echiche nke karting Harderwijk ihe ohuru agbasaala. Ime ụlọ nwayọọ ụgbọ mmiri bụ ụzọ ịma aka na ụzọ ọhụrụ nke karting. Site na karts ejiri nwayọ wee nwee ike ịnyagharị kart n'otu akụkụ ka ị nwee ike ịgafe karts ndị ọzọ n'ụzọ dị mfe. Nke ahụ rụpụtara ọnọdụ dị egwu na egwu ahụ! Ezigbo njem na ndị enyi gị ma ọ bụ maka nnọkọ bachelor.
Nwere ike parachute ọzọ!
Ndị na-eto eto ndị ọchụnta ego Julian na Maurits 't Jong nwere ebe omume mara mma na ụlọ ọrụ ochie nwere otu aha "De Fabriek". Can nwere ike ebe a ihe omume ịhazi, egwuregwu ụlọ mgbapụ mee na n'ezie ime ụlọ nwayọọ karting.
Na a mara mma udo ọnọdụ, anyị nwere ike iche na ebe a bụ nnọọ jụụ ihe omume na-aga-eme n'ọdịnihu. Mụnna malitere na oge nke corona mkpọchi na-emeghe n'oge na-adịbeghị anya.
You ga-eji kart gị fefu site na ịdọrọ onye lever n'akụkụ aka nri mana kpachara anya! Mee nke a n'ụdị dosed ma ọ bụ na ị na-atụgharị ka ọ bụrụ na ị na-akwọ nnukwu banana na Mario Kart
Ihe omuma banyere ikike karto Indoor
Maka ụmụaka n’agbata afọ 8 na 12 ị na-akwụ ụgwọ site na € 6,50 kwa okpomọkụ. Maka 12 + nke a sitere na € 7,50 kwa okpomọkụ. Ọ bụrụ n’ịchọrọ iso ndị otu bọọlụ gị ma ọ bụ ọgbakọ hockey na-asọgharị gị, otu ndị enyi ma ọ bụ nnọkọ bachelor, ị nwere ike ịhọrọ ngwugwu maka ndị 10-20.
ngwugwu maka ịpụpụ otu gụnyere:
- Site na mmadụ 10 - mmadụ 20 (oge elekere 2)
- 2 Heats pp
- Tupu ma ọ bụ mgbe karting nke sausaji ma ọ bụ poffertjes na lemonade
- drinks Additionalụ (ihe ọ softụ )ụ) mmanya na nri, wdg
- Nwa Oge site na € 27,50 maka € 22,50 pp!
Kpọtụrụ De Fabriek? Kedu ike, Pịa ebe a.
Ntụle nke Thrilltalk:
Ekwela ka anyị zụọ onwe anyị ma nwee ike ịsị: LOL !. O siri ike ịkọwa ihe ihe ịgbaji na-eme gị, mana na ị na-ekpori ndụ bụ eziokwu. Ebe karting nkịtị bụ ihe ọ bụla gbasara ọsọ ọ ga-akacha mma, ịgba bọọlụ bụ ịgba egwu. Njikwa ahụ na-eme ụfọdụ iji ha eme ihe na mbido, nke na-eme ka ọnọdụ dị egwu na egwu ahụ. Anyị ga-achọ ịga leta ọzọ!
ụzọ mgbapụ ihe omume Harderwijk okpomọkụ Ime ụlọ nsụgharị karting akpa ọchị
Denye nri gị site na ngwa ahụ na Avonturenpark Hellendoorn
Max Verstappen na Honda na-aga maka mmeri
Nkeji 4 gara aga